७० वर्षको उमेरमा दोस्रो बिहे गर्छु भन्दै महिलाको पछि लाग्दा ३ करोड रूपैयाँ झ्वाम ! – Dcnepal
७० वर्षको उमेरमा दोस्रो बिहे गर्छु भन्दै महिलाको पछि लाग्दा ३ करोड रूपैयाँ झ्वाम !
प्रकाशित : २०७९ असार ७ गते १४:३८
काठमाडौं । लखनउका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरले दोस्रो बिहेको सपना देख्नु महँगो परेको छ । वास्तवमा, जसलाई डाक्टरले विवाहको कुरा गरिरहेका थिए, उनले डाक्टरसँग एक करोड ८० लाख रुपैयाँ (झण्डै ३ करोड नेपाली रुपैयाँ) ठगेर भागेकी छिन् । त्यसपछि उनले फोन अफ गरिन् । आफू ठगिएको थाहा पाएपछि डाक्टरले साइबर क्राइम प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएका छन् ।
जानकारी अनुसार लखनउमा बस्ने ७० वर्षीय हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुरादाबादको ठूलो अस्पतालमा तैनाथ छन् । उनकी श्रीमतीको तीन वर्षअघि निधन भएको थियो । डाक्टरले आफूलाई एक्लो महसुस गरे। त्यसैले उनले फेरि बिहे गर्ने सोच बनाए । यसका लागि डाक्टरले जनवरीमा विवाहको लागि पत्रिकामा विज्ञापन छापेका थिए ।
पीडित डाक्टरले विवाहको विज्ञापन छापेपछि धेरै प्रस्ताव आएको उजुरीमा बताए । तर उनलाई ४० वर्षीया कृषा शर्मा मन पर्यो । कृषासँग फोन र ह्वाट्सएपबाट कल मार्फत दुवैबीच कुराकानी सुरु भयो । आफू मरिन इन्जिनियर भएको भन्दै कृषाले आफ्नो सम्बन्धविच्छेद भएको र अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने बताइन् ।
कृषाले अहिले आफू अमेरिकामा ठूलो कार्गो जहाजमा इन्जिनियरको काम गरिरहेको डाक्टरलाई बताइन् । करिब डेढ महिनापछि उनी मुम्बई हुँदै लखनउ आउने उनले बताइन् । कृषाले अहिले जागिर छोडेर व्यापार गर्ने सोचमा रहेको डाक्टरलाई बताइन् । जागिरको क्रममा उनले अफ्रिकाबाट धेरै सुन किनेको बताउँदै यो सुनलाई भारत पठाउन चाहेको बताइन् किनकी यति धेरै सुन साथमा ल्याउनु खतरायुक्त हुन्थ्यो ।
डाक्टरलाई कृषाले रोयल सेक्युरिटी कम्पनीबाट सुन पठाएको बताइन् । उनले डाक्टरलाई सुन लिन आग्रह गरिन् । कुरियर कम्पनीको तर्फबाट डाक्टरलाई फोन आयो। उनले डाक्टरसँग भन्सार शुल्क र अनुमति शुल्कको नाममा १ करोड ८० लाख मागेका थिए । डाक्टरले पनि उनलाई पैसा दिए ।
पछि कृषालाई फोन गर्दा उनको नम्बर स्वीच अफ थियो, त्यसपछि डाक्टरले आफू ठगिएको थाहा पाए । उनले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊमा एफआईआर दर्ता गरे। एडीसीपी राघवेन्द्र मिश्रका अनुसार उनले डाक्टरको उजुरीमा एफआईआर दर्ता गरेका छन्। प्रहरीले सम्पूर्ण घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।